Kumagai Tsuneko Memorial Hall Reiwa 3rd Year 3rd Memorial Hall Hall
202111 / 25(Osisi)
MkpakọrịtaMemoriallọ Nzukọ Ncheta Kumagai Tsuneko
"Akụkọ nke Tsuneko Kumagai na di ya Koshiro"
Okwu mmalite nke ọdịnaya
Tsuneko Kumagai (Kumagata Tsuneko 1893-1986), onye na-agụ akwụkwọ kana, mere ihe ngosi ngụsị akwụkwọ na 1982 iji cheta mmeghe nke Kyukyodo Gallery, ebe di ya nwụrụ anwụ bụ Koshiro bụ onye njikwa. Ka Kyukyodo na-eme ememe ncheta 2022th ya na 40, Tsuneko ga-ewebata akụkọ ihe mere eme site na nzute ya na Koshiro Kumagai (1887-1973) na ijide ihe ngosi ngụsị akwụkwọ.
Tsuneko Kumagai na di ya Koshiro n'ụlọ n'ụbọchị a mara ọkwa nke Order of the Precious Crown (1967)
Satọde, 2022 Maachị 2
14: 00-15: 30 (Meghere site na 13:30)
Daejeon Bunkanomori otutu ime ulo
* Ọ bụrụ na ikike karịrị, a ga-enwe lọtrị.
* Ego ntinye n'efu
Ga-abịarute na Tuzdee, Febụwarị 2022, 2
Biko tinye akwụkwọ ozi site na "kaadị njem okirikiri" ma ọ bụ "FAX" (ihe ruru mmadụ 1 kwa mail).Biko dejupụta koodu nzi ozi, adreesị, aha (furigana), afọ, akara ekwentị, na "N'ezie Ụlọ Nzukọ Ncheta nke atọ" ma ziga ya na ndị a. * Ọ bụrụ na itinye akwụkwọ site na fax, biko jide n'aka na itinye nọmba faksị maka nzaghachi.
* Anyị nwere ike ịnye ozi dịka aha gị na ozi kọntaktị gị n'ụlọ ọrụ ọha dịka ụlọ ọrụ ahụike dịka ọ dị mkpa.Biko rụba ama.
〒143-0024 4-2-1 Central, Ota-ku Ota-ku Ryuko Memorial Hall "Ngalaba Ncheta Ụlọ Nzukọ nke atọ"